लिपुलेक र कालापानी विवादबारे चीनले बल्ल मुख खाेल्याे, दियो यस्तै गैरजिम्मेवार जवाफ — Sanchar Kendra
१पदभार सम्हालेकाे २४ घण्टा नबित्दै गृहमन्त्री अधिकारीले चाले यस्तो कदम, ७७ वटै जिल्लालाई गयो सर्कुलर
२दाङको तुल्सीपुरमा गो’ली चल्यो, १ युवक पक्राउ
३सञ्चारकेन्द्रका समाचारहरु अव मेरो कुंडली एपमा पनि
४राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा फेरि पदमुक्त
५आज बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
६बालुवाटरमा प्रदर्शन गर्ने नागरिक अगुवामाथि धरपकड, नारायण वाग्ले रखगेन्द्र संग्रौलासहित १८ जना पक्राउ
७कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने रामदेवको घोषणा
८सभामुख सापकोटाले बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली नजाने
९सर्वोच्चले आफ्नै परमाधेशविपरीत अन्तरिम आदेश दियो- मुख्यमन्त्री पोखरेल
१०विश्वकप छनोटमा नेपालले आज अष्ट्रेलियाको सामना गर्दै
११कोरोनाविरूद्धकाे १० करोड डोज खोप दिने बेलायतको घोषणा, क-कसले कहिले पाउछ ?
१२कोरोनाबिरुद्ध लड्न बेलायतले गर्यो यस्तो घोषणा
लिपुलेक र कालापानी विवादबारे चीनले बल्ल मुख खाेल्याे, दियो यस्तै गैरजिम्मेवार जवाफ
काठमाडौं । चीनले लिपुलेक, कालापानीको सीमा विवाद नेपाल र भारतको भएको बताएको छ । र, दुई देशले आपसी सम्वादबाट हल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । भारतले लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक बनाएको छ ।
त्यसको नेपालले विरोध गरेको छ भने सोमबार मात्र लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा पास गरेको छ । तर यो सडक दुई देशबीच २०१५ मा भएको सहमतिअनुसार बनेको र चीनसम्म जोडिएकाले नेपालले उत्तरी छिमेकीसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको एक प्रश्नमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजेनले भने, ‘कालापानीको मुद्दा नेपाल र भारतको हो र हामी आशा गर्छौ कि दुई देशले मैत्रिपूर्ण परामर्शबाट विमतीहरु हल गर्नेछन् ।’ साथै चीाले एकपक्षीय कदम, जसले स्थिति जटिल बनाउन सक्छ, त्यसबाट दुबै देश बच्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपाली भूमि भएको थाहा पाएकै अवस्थामा लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको मानसरोवर जाने बाटो बनाउने बेलामा चीनले भारतसँग सम्झौता गरेको छ तर अहिले उक्त समस्या नेपाल र भारत हो भन्दै गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया दिएपछि नेपालमा त्यसको बिरोध सुरु भएको छ ।
यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो भूमि भएको बताएका छन् । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा यस्तो बताएका हुन् प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो भूमि भएकोभन्दै यसलाई जसरी पनि फिर्ता लिने बताए । भारतले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर विवादको भूमि बनाएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले यो नेपाली भूमि यो भूमिका विषयमा कुनै विवाद नभएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मन्त्रिपरिषदेबाट हिजो हामीले नयाँ नक्सा जारी गरेका छौं । २०१८ सालसम्म जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने कामहरु भएका थिए । त्यसपछि तिरो उठाउन जान नदिनेजस्ता काम भयो । १९६२ मा कालापानीमा भारतीय सेना बसेपछि त्यभन्दा पश्चिमतर्फ जान बन्द गरियो । त्यसबेलाका शासकहरुले सहेर बसे । तर अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो भूभाग फिर्ता लिएर छाड्छौं । हामी छाड्नेवाला छैनौं । हामीले कोही रिसाउँछ कि भनेर कुनै कदम चालेका हैनौं ।’
‘जसरी हामीले नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको थियौ, त्यो काम हामीले गरेका छौं । देखाउनका लागि तथाकथित राष्ट्रवादको कुरा नेपालको नक्साका विषयमा होइन । यो कुनै तमासा गरिएको होइन, यो यथार्थमा फिर्ता लिन गरिएको हो,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्साका बारेमा सदनमा जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संविधानको अनूसुची–३ मा रहेको नेपालको प्रतिक चिन्ह संशोधन गर्न संविधान संसोधन प्रस्ताव पेस हुनेछ ।
अरु विषयमा पनि संसोधनका विषयमा भोलि छलफल गर्नसकिन्छ तर अहिले भूमि फिर्तासँग सम्बन्धित तत्कालको महत्वको विषय भएका कारण यहि अधिवेशनमा संविधान संसोधनको प्रस्ताव आउनेछ । मैले विश्वास लिएको छु । संसदले पारित गर्नेछ ।
माधव पक्षका १७ सांसदसंग मागियो २४ घण्टे स्पष्टीकरण, के हो कारण ?